Umhlaba weNgonyama yilona ohlala kuwona – Bayede News
iBayede Kuleli Sonto
Kuleli binza umbhali uMfo wakwaNomajalimane
by Bayede-News Posted on 8 August 2019 14 August 2019
Umhlaba ozulelwa ngamanqe ngokombiko wethimba longoti elajutshwa nguHulumeni
Kuleli binza umbhali uMfo wakwaNomajalimane uthi zindala zombili isiyolanyulwa nguZulu
Ngesonto eledlule kulo leli phephandaba Ozul’azayithole babike ngomuga ovelele uZulu kungaqali. Lona ngumuga wokukhuluma okuthi uhlaka loBukhosi okuthiwa yi-Ingonyama Trust kumele luphele.Njengoba kucacile kubafundi bephephandaba abebephawula ngalo mbiko ezinkundleni zokuxhumana nakuzo izingcingo lolu daba alukho lula lujulukisa ibuzi. Lokhu akumangazi ingani phela lapha kukhulunywa ngento engumongo womzabalazo waboHlanga.
Khona lapho kukhulunywa ngomhlaba wokhokho kanye nensimu yogogo bethu. Uma kubukwa lolu daba kuhle kuqale kwamukelwe ukuthi kulo kubhixana izinkuzi ezimbili; okunguHulumeni noBukhosi. Zombili lezi zinkunzi zinesikhwele esimangalisayo ngabantu kanye namandla ezinikwe wona yivoti kanye nemvelo. Ngeke nje umthinte uHulumeni ngabantu ababizwa ngezakhamuzi noma abavoti. Wazi ukuthi ngabakhe futhi bavotele yena ngoba bemthanda bamnika ilungelo lokubacabangela nokubenzela.
[button color=”green” size=”big” link=”https://pressreader.com/south-africa/bayede/” icon=”” target=”true” nofollow=”false”]QHUBEKA UFUNDE[/button]
UHulumeni lona uzazi ngekhanda izinombolo zalaba bantu, uyabazi abangasebenzi, abasha, abahlwempu futhi ukubeka kuye ukuthi nguye okumele abakhiphe kulolu taku abakulo nokuthi nxa kubahambela kahle abokwazi ukuthi nguHulumeni obe ngumenzi wezinto. Ngakolunye uhlangothi uBukhosi bumile ekutheni isizwe lesi ngesoBukhosi “njengoba kusho umlando’. Kubo isizwe lesi singale kokuba ngabavoti.
OseSihlalweni okuyiSILO ngokwamafelankosi ukhonjwwe ngumunwe womlando ukuba abe ngubaba wesizwe. UHulumeni ubazi njengezinombolo nje abantu, uBukhosi bona bubazi ngamagama ngoba izinhlaka zabo zikhona lapha kobantu. Ngokwabeseka uBukhosi, iSILO lukhozi olwakhiwe yizinsiba okuyisizwe, nxa lundizela phezulu ukhozi lusuke lwembathwe futhi lulekelelwa yizinsiba. Uma uthatha izinsiba okhozini usuke ulihluthula, uqeda ngalo.
Nakho-ke lapha iwukana khona, ngokukaHulumeni nguye okumele abhekele abantu umhlaba. Nalapha eBukhosini ngesifanayo. Inkulumompikiswano lena ekhona ilapho nje akukho okunye, uma kukhona akwedluli lokhu okungenhla. Akulula ukuba kube khona egoba uphondo ngoba intombi le (abantu nomhlaba) yiyo engayilamula ngoba iyoqoma lapho ithanda khona.
Uma singakhuluma ngomhlaba lona ongaphansi kweSILO okuyiso esingumnini ngokomthetho (njengoba siyiTrustee) nomvikeli nokwesimiso soBukhosi bukaZulu. Lapha kuningi ukucophelela okumele kwenziwe yizo zombili izinhlangothi.
Ngasohlangothini lukaHulumeni kumele akhethe ukuthi ngabe uzolalela okushiwo ngongoti noma uzothatha isinqumo ngokuqonda ipolitiki, umthetho wezwe kanye nokwazi isikompilo nosikonkolo lwabathintekayo.
UHulumeni kazwelonke, owesifundazwe kanye nowendawo kuyomele ekwenzeni kwabo baqhamuke nobufakazi bokuthi bekumele kube njalo, nokuthi ibingekho enye indlela.
Okusho ukuthi kumele bathi, “Impela silubukile lolu daba lomhlaba kaZulu, saphetha ngokuthi akumelwe uphathwe ngokwesiko ngalezi zizathu ezilandelayo”. Lokhu nje kukodwa kuzokwenza zaziwe izizathu zikaHulumeni noma kulokhu ngithi uMengameli uRamaphosa ngoba okuvelayo wukuthi, “Akusho yena kepha kusho ithimba longoti”.
Umbuzo uthi kambe ongoti sebengashayela yini iqembu noma uHulumeni? Omunye athi kungadlalwa ngongoti ngoba bashilo phela ukuthi abaqhamuke nakho wuphenyo neziphakamiso ngakho uMengameli unelungelo lokuphikisana nophenyo neziphakamiso.
Ngakolunye uhlangothi uBukhosi bumele buphumele obala buchaze ubumqoka balo mhlaba okukhulunywa ngawo. Ukuthi uma uthathwa kuzokwenzakalani kusikompilo nosikonkolo kaZulu. Ngokwami kumele kuze kuchaze ukuthi konje ukhona yini umhlaba njengoba abangasiqondi isimiso sikaZulu besho, okungoweSILO noma singumvikeli wawo.
Kepha mhlawumbe okumqoka kakhulu wukuphawula komphakathi ohlala kulezi zindawo okusobala ukuthi ekugcineni yiwo siqu ozothinteka. Uzothinteka njengezakhamuzi kanye nabanikazi besiko. Phela kumqoka ngoba umhlaba lo owenganyelwe yi-Ingonyama Trust yilo izinkulungwane zabahlala emakhaya ziwubiza ngekhaya. Sikhuluma ngobudlelwano phakathi kwalo mphakathi kanye nomhlaba iSILO ngembizo yokuqala kaZulu ngomhlaba Ondini nyakenye sathi: “Ezinkulungwaneni zabahlala emakhaya ngaphansi koBukhosi umhlaba uyikho konke, uyingubo yabo. Uyikhaya, uyinsimu, ungamadlelo ekugcineni ube yindawo lapho belondoloze khona imizimba yalabo abayimindeni nezithandwa zabo”, kusho Omdala.
Ngenxa yalezi zizathu nezinye sekungayiphutha ukuthi abanumzane, omama, amadodana namadodakazi ahlala kulezi zindawo akhelwe nawo amukele isithombe esithi le nkulumompikiswano ekhona ingeSILO. Qha bo iqiniso lithi ingamasimu, ingezindlu, ingezinkalo nangamathuna. Noma yiluphi uguquko okukhulunywa ngalo nakanjani lizowuthinta lo mphakathi, ngoba vele le nkulumo ingabo.
Kungumsebenzi weBhodi le-Ingonyama Trust eliholwa nguMehluleli uJerome Ngwenya ukuba liqhahmuke nohlelo lokuqinisekisa ukuthi okubhalwe kulo mbiko kanjalo nezincomo OMdala amile ekutheni akaziswanga ngazo ziyaziwa futhi ziyaqondwa ngumphakathi. Ingozi yokungakwenzi lokhu isekutheni imibiko yabezindaba nokuhlaziywa kodaba kuzobeka isithombe sokuthi kubanga iSILO siqu noHulumeni.
Posted in iBayede Kuleli Sonto